Play online in oz Lotto . Win malaayiin . : PlayLotteryOnline.info 2022
Lotto oz ka yimaadaa Australia . Tattersall ee horseedka oz ciyaarta Lotto .
Isku aadka markii ugu horeysay ka dhaceen on 26.02.1994 . Tani waa bakhtiyaa ugu horeeyay ee qaranka Australia .
Waayo, 11 sano ee ugu horreysa oz ciyaarta Lotto lahaa xeerarka isla ee ciyaarta sida ciyaarta Australian - Saturday Lotto . Lotto Saturday The lahaa in la tirtiro 6 Lambarada telefoonno 45 . Laga soo bilaabo 18.10.2005 sanadka ee Lowyacaddu Oz Lotto sidoo kale waa lambar toddobaad . Sidaas darteed, ciyaaryahanka uu leeyahay fursad wanaagsan oo ku guulaystay . Podsumuwując hadda ciyaaro oz Lotto dhigid ka kooban yahay 7 lambarada soo baxay Lambarada 45 .
By beddelo xeerarka ciyaarta bakhtiyaanasiibka oz Lotto ayaa magaceeda Tatts gobolka ee Australia ku beddeleen wax Super 7 ee Oz Lotto iyo gobolka of Queensland Oz 7 Lotto . Tirada nasiib barbaro waxaa la qabtaa fiidkii Talaadada .
Abaalmarinta ugu weyn ee ugu yaraan $ 2 million Australian . Guushii ugu weyneyd ee oz Lotto Play ilaa $ 106,549,984.76 ilaa hadda . Guuleysto u qaybsan yahay laba qof - qofka ugu horreeya ee ka timaada Queensland , halka qofka labaad ee ka timaada South Australia .